Microsoft Windows 10 Pro (OEM E-License Key) ~ ICT.com.mm
HomeMicrosoft Windows 10 Pro (OEM E-License Key)
Microsoft Windows 10 Pro (OEM E-License Key)
Activate existing Windows 10 Pro. Upgrade your Windows 10 Home to Windows 10 Pro. Upgrade your Windows 7/8 to Windows 10 Pro. No subscriptions – No monthly/annual fees Instant Delivery & Download... [Learn more]
Brand: MicrosoftSKU: 194967N/ASee more: Accessories & Supplies, Microsoft, New Arrivals, Products, Shop, Softwares & Applications, Under 100kFilter by: EDIT-ONE, Operating Systems
Upgrade your Windows 7/8 to Windows 10 Pro.
Windows 10 Pro ကတော့ လုပ်ငန်းသုံး Professional တွေအတွက် လုပ်ငန်းသုံး ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ BitLocker နဲ့ BitLocker to Go တို့ကသင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို Lockdown ချပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့်သင့်ရဲ့စနစ်တွေကိုရော ဒေတာတွေကိုပါ ဘယ်သူကမှ ရယူနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင့် Windows 10 Pro မှာ သင့်ရဲ့ Excel, Word နဲ့ PowerPoint ဖိုင်တွေကို အလိုအလျောက် Cloud ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် File တွေ ပျောက်ဆုံးပျက်စီးမှာ မပူရတော့သလိုသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကို အလွယ်တကူနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။ Log in with Remote Desktop နဲ့ သင့်ရဲ့ Windows 10 Pro ထည့်သွင်းထားတဲ့ ကွန်ပြူတာကို login ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အိမ်၊ကော်ဖီဆိုင် သို့မဟုတ် လမ်းပေါ် စသဖြင့် အင်တာနက် connection ရှိတဲ့ ဘယ်နေရာကမဆိုသင့်ရဲ့ဖိုင်တွေကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Store ထဲမှာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် App Section တစ်ခု ဖန်တီးထားနိုင်ပြီး သင်အသုံးများဆုံး ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို စုစည်းထားနိုင်ပါတယ်။Windows Defender Antivirus ဟာ Cloud, Wide optics, Machine learning နဲ့ Behavior Analysisတို့လို အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Automatic Update ပြုလုပ်ပေးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်လည်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သမျှ တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Office ဆော့ဖ်ဝဲတွေအတွက် ပိုပြီးသင့်တော်တဲ့ Multitaskingလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် သင့်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို သင့်စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Office Apps တွေနဲ့ Docs တွေကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းမှာအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ပူးတွဲချိတ်ဆက်တာမျိုး ပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့်သင့်ရဲ့ Productivity ကို ပိုမိုမြင့်မားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမော်ဒန် အင်တာနက်လောကကိုလျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Microsoft Edge Browser ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
If your device is lost or stolen, BitLocker and BitLocker to Go put everything on lockdown, so no one else can access your systems or data. Your Office files like Excel, Word, and PowerPoint automatically get stored in the cloud, which acts asavirtual online drive, so you can share and work on documents in real time. Log in with Remote Desktop to use your Windows 10 Pro PC while at home, on the road, or anywhere there's an internet connection. Create your own private app section in the Windows Store for convenient access to the apps you need most.
Total price:K97,000 K83,200
This item: Microsoft Windows 10 Pro (OEM E-License Key) K40,000